OGAYSIISKA GUUD EE HAWLAHA ASTURNAANTA | UW Medicine
OGAYSIISKA GUUD EE HAWLAHA ASTURNAANTA
BILAABMAYA JUUN 1,2016
OGAYSIISKA GUUD EE HAWLAHA ASTURNAANTA (PDF)
Ogaysiiskani waxa uu qeexayaa sida macluumaadka caafimaadka ee kugu saabsan loo isticmaali karo oo shaaca looga qaadi karo iyo sida aad u gali karto macluumaadkan.
Fadlan dib-ugu eeg si dagan..
Marka ay timaado macluumaadka caafimaadkaaga, waxaad leedahay xuquuqo gaar ah.
Xulitaankani waxa uu sharaxayaa xuquuqahaaga iyo qaar ka mid ah masuuliyadahaaga si uu kuu caawiyo.
Hel nuqul waraaq ama mid electaroonik ah rikoodhka caafimaadkaaga.
Waxaad codsan kartaa qoraal ahaan si aad u eegto ama aad u hesho warqad elektaroonik ah ama nuqul waraaq oo rikoodhka caafimaadkaaga ah iyo macluumaadka kale ee caafimaadka ee aan hayno. Na waydii sida tan loo sameeyo.
Waxaan bixin doonaa nuqul ama koobid macluumaadkaaga caafimaad. Waxaad bixin kartaa kharash macquul ah, kharash lacageed.
Na waydii si aad u saxdo rikoodhkaaga caafimaad.
Waxaad na waydiin kartaa si aad u saxdo macluumaadka caafimaadka ee ku saabsan adiga ee aad u malaynayso in aanu sax ahayn ama aan dhamaystirnayn. Na waydii sida tan loo sameeyo.
Waxaan odhan karnaa “maya” codsigaaga, laakiin waxaan kuugu sheegi doonaa sababta qoraal ahaan.
Codso wada hadalada gaarka ah.
Waxaad na waydin kartaa in aan kuula soco xidhiidhno si gaar ah (tusaale ahaan telefoon guri ama xafiis) ama in aan kuugu soo dirno iimayl cinwaan ka duwan.
Waxaan odhan doona “haa” dhammaan codsiyada macquulka ah.
Na waydii si aan u xadayno waxa aan isticmaalno ama dadka la wadaagno
Waxaad na waydiin kartaa in aanan isticmaalin ama aanan cid la wadaagin macluumaadka caafimaad gaar ee dawaynta, lacagbixinta, ama qaliinadayada.
Na loogama baahna in aan kugu waafaqno codsigaaga, oo waxaan odhan karnaa “maya” hadii ay saamayn karto daryeelkaaga.
Haddii aad bixinayso adeeg ama walax daryeel caamifaad in aad ka wada bixiso jeebka, waxaad na waydiisan kartaa in aanaan faafin warkaasi ujeedada bixinta ama hawlgaladayada caymisyada caafimaadkaaga.
Waxaan odhan doonaa “haa” ilaa sharcigu nooga baahan yahay in aan faafino macluumaadka.
Hel liiska kuwan aan la wadaagnay macluumaadka
Waxaad dalban kartaa liis (xisaabin) wakhtiyada aan faafinay macluumaadkaaga caafimaad lix sano ka hor wakhtiga aad codsatay, cida aan la wadaagnay, iyo sababta.
Waxaan soo galin doonaa dhammaan bandhigyada marka laga reebo kuwa ku saabsan daawada, lacagbixnta, iyo hawlaha daryeelka caafimaadka, iyo bardhigyo kale oo gaar ah (mid kasta oo aad na waydiiso in aan samayno). Waxaan ku bixin doonaa hal xisaabin sanadkii bilaash laakiin waxaan qaadi doonaa qiimo macquul ah hadii aad codsato midkale sanad gudihii.
Ka hel nuqul ogaysiiskan gaar ahaaneed
Waxaad dalban kartaa nuqulka warqad ee ogaysiiskan wakhti kasta, xitaa hadii aad aqbasho in aad ku hesho ogaysiiska elektaroonik ahaan. Waxaan kuu siin doonaa tiiyoo ay la socoto nuqul warqad ah si dagdag ah.
U dooro qof si uu kuu matalo
Haddii aad siisay qof awooda caafimaad ee qareen nimo ama hadii qof uu yahay ilaaliyahaaga sharci, qofkaasi waxa uu eegayaa xuquuqahaaga oo waxa uu samaynayaa doorashooyin ku saabsan macluumaadkaaga caafimaad.
Waxaan hubsan doonaa in qofku haysto awoodan oo uu ku matali karo inta aanaan qaadin wax talaabo ah.
Gudbi cabasho hadii aad dareento in xuquuqahaagii la jabiyay
Waad ka andacoon kartaa hadii aad dareento in aan jabinay xuquuqahaagii adiga oo nala soo xidhiidhaya isticmaalayana macluumaadkan hoose.
Waxaad u gudbin kartaa cabasho Waaxda Caafimaadka Maraykanka iyo Xafiiska Adeegyada Bina-aadamnimada ee Xuquuqda Shacabka (U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights) adiga oo u diraya warqad 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, wacaya 1.877.696.6775, ama booqanaya www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/.
Kaagama aargoosan doono gudbinta cabasho.
Macluumaadyada caafimaad qaar, waxaad noo sheegi kartaa doorashadaada ku saabsan waxa aan faafinayno.
Hadii aad hayso xigasho cad oo ku saabsan sida aan u baahinay macluumadkaaga xaaladaha hoos ku xusan, nagala hadal. Noo sheeg waxa aad naga doonayso in aan samayno, oo waani raaci tilmaamahaaga.
Waxaad ledahay ikhtiyaarka iyo xuquuqda ladaba in aad noo sheegto:
Lawadaag macluumaadka waalidkaaga, asxaabta dhaw, iyo kuwa kale ee ku lug leh daryeelkaga.
La wadaag macluumaadka xaalada dajinta masiibada.
Kudar macluumaadkaaga agaasime cusbitaal.
Haddii aanad awoodin in aad noo sheegto tixraacaaga, tusaale ahaan hadii aad tahay mid suuxsan, waan sii wadi karnaa oo waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga hadii aan isnidhaahno in ay adiga kuu wanaagsantahay. Waxaa kale oo aad faafin kartaa macluumaadkaaga marka loo baahan yahay in lagu yareeyo caqabad wayn oo halis ah oo caafimaad ama badbaado.
Xaaladahan marna faafino macluumaadkaaga ilaa aad na siiso ogolaasho qoraal ah:
Faafinta ugu badan ee qoraalada daawaynta maskaxda
Waanu kaala soo xidhiidhi karnaa dadaalada maalgalinta, laakiin waad noo sheegi kartaa in aanaan dib kuula soo xidhiidhin.
ISTICMAALADAYADA IYO BANDHIGYADAYADA
Sidee ayaan gaar ahaan u isticmaalnaa ama aan u faafinaa macluumaadkaaga?
Waxaan sideedaba isticmaalnaa ama aan u faafinaa macluumaadkaaga caafimaad hababkan soo socda.
Si aan kuu dawayno
Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga caafimaad xirfadlayaasha kale ee ku dawaynaya.
Tusaale: Dhakhtar kaa dawaynaya dhaawac ayaa dhakhtar kale waydiiyay xaalada caafimaad ee guud.
Waxaan u faafin karnaa caafimaad si aan u socodsiino hawshayada, aan u hagaajino daryeelkaaga, oo aan kuula soo xidhiidhno markii ay lagama maarmaan tahay.
Tusaale: Waxaan isticmaalnaa macluumaad caafimaad oo kugu saabsan si aan u maarayno daawayntaada iyo adeegyadaada.
Waxaan u isticmaali karnaa oo aan u faafin karnaa macluumaadkaaga caafimaad si aan lacag uga helno qorshayasha caafimaad ama dhinacyada kale.
Tusaale: Waxaan bixinaa macluumaad ku saabsan adiga iyo qorshaha caymiskaaga caafimaad si ay u bixiso adeegyadaada.
Sidee kale ayaan u isticmaali karnaa ama aan u faafin karnaa macluumaadkaaga caafimaad?
Waxaa na loo ogolyahay ama na looga baahan yahay in aan u faafino macluumaadkaaga habab kale - badanaa habab ka qaybqaata wanaaga dadwaynaha, sida caafimaaka bulshada iyo cilmi baadhista. Waa in aan buuxinaa xaalado badan oo dhinaca sharciga ah ka hor inta aanaan u faafin macluumaadkaaga u jeedooyinkan. Macluumaad dheeraad ah eeg: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.
Caawinta caafimaadka bulshada iyo arimaha badbaadada
Waxaan faafin karnaa macluumaadka caafimaad ee adiga kugu saabsan xaaladaha qaarkood sida:
Ka hortagida xanuun
Caawinta dibu eegista wax soo saarka
Wargalinta dhibaatooyinka dawooyinka
Wargalinta faraxumayn laga shakisanyahay, dayac, ama khilaaf guri
Ka hortaga ama yaraynta dhibaato halis ah oo qof caafimaadkiisa ama badbaadadiisa
Samayn cilmi baadhis
Xaaladaha qaarkood, waxaan u isticmaali karnaa in aan baahino macluumadkaaga cilmibaadhis caafimaad awgeed.
Si aan u raacno sharciga
Wali waxaan faafinaa macluumaadka ku saabsan adiga hadii xeerka gobolka ama dawladu codsado, tiiyo ay ku jiraan Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Bina- aadamnimo (Department of Health and Human Services) hadii ay doonayso in aan aagno in aan raacayno xeerka asturnaanta ee dawlada.
Si aan uga jawaabno codsiyada bixinta xubnaha ama unugyada
Waxaan la wadaagi karnaa macluumaad caafimaad ee kugu saabsan adiga ururada baadhida xubnaha.
La shaqeeye baadhe caafimaad ama agaasime xabaaleed.
Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadka caafimaad masuul dawladeed, baadhe caafimaad, ama agaasime xabaaleed marka qofku dhinto.
U abaarno xaqsiinta shaqaalaha, xoojinta sharciga, iyo codsiyada kale ee dawlada
Waxaan isticmaali karnaa ama aan baahin karnaa macluumaadka caafimaad ee kugu saabsan:
Dacwadaha xaqsiinta shaqaalaha.
Ujeedooyinka xoojinta sharciga ama masuul xoojin sharci
Wakaaladaha kormeerka caafimaadka hawlaha uu ogolado sharcigu
Shaqooyinka gaarka ah ee dawlada sida milatariga, amaanka guud, adeegyada ilaalada madaxwaynaha
Uga jawaabno sharciyada iyo talaabooyinka sharci
Waxaan faafin karnaa macluumaadka caafimaad ee kugu saabsan adiga anaga oo jawaab ka bixinayna amar maxkamad ama amar maamul ama ka jawaabna amarada sharciga.
Ilaalin dheeraad ee macluumaadka caafimaad
Sharciyo gaar ah ayaa waxay dabaqaan noocyo gaar ah oo macluumadyo caafimaad. Waxaa jira ilaalo sharci oo dheeraad ah oo ku saabsan macluumaadka caafimaad ee xanuunada la isku gudbiyo, rikoodhada mukhaadaraadka dawada iyo alkoosha, rikoodhada caafimaadka maskaxda , iyo macluumaadka HIV/AIDS. Marka uu u baahan yahay sharcigu, ma baahin doono macluumaadka noocan ah anaga oo aan haysan ogolaashahaaga qoraalka ah.
Xaaladaha qaarkood, macluumaadka bukaanka yar (kayar 18 sano) waxa uu heli karaa ilaalin dheeraad ah.
Waxaa la inooga baahan yahay sharci ahaan in aan sii wadno asturnaanta iyo amaanka maclumaadkaaga caafimaad ee ilaashan.
Waxan kuu ogaysiin doonaa si dhakhso ah haddii uhogaasami la’aani dhacdo taas oo waxyeeli karta asturnaanta iyo amaanka macluumaadkaaga.
Waa in aan raacnaa waajibaadyadada iyo waxqabadyada asturnaanta ee lagu qeexay ogaysiiskan oo aan ku siino nuqul kamid ah.
Ma isticmaali doono ama ma faafin doono macluumaadkaaga aan ahayn sida aan ku qeexnay halkan ilaa aad noo sheegto waan karnaa qoraal ahaan. Haddii aad noo sheegto waan karnaa, waad badali kartaa maskaxdaada markasta. Nagula soo socodsii qoraal ahaan hadii aad badasho fikirkaaga.
Isbadalada shuruudaha ogeysiiskan
Waxaan badali karnaa shuruudaha ogaysiiskan, oo isbadaladu waxay dabaqayan dhammaan macluumaad aan kaa hayno adiga. Ogaysiiska cusubi waxa uu ku iman doonaa codsi ahaan, xafiiskayaga, cusbitaal, iyo boggayaga intarnatka.
Ogaysiiskan dhan ee ku saabsan Hawlaha Asturnaanta waxa uu dabaqayaa UW Medicine iyo Ururka Daryeelka Kansarka ee Seattle( SCCA), ku waas oo ka fuliya adeegyo daryeel caafimaad meelo badan oo kamida Seattle. Iyo shaqaalaha goobahan caafimaad.
UW Medicine waxaa kamida Goobahan caafimaad Xarunta Caafimaadka iyo Cusbitaalka Harborview (Harborview Hospital and Clinics), Cusbitaalka Northwest & Xarunta Caafimaadka (Northwest Hospital & Medical Center and Clinics), Xarunta Caafimaadka Valley iyo Cusbitaalka (Valley Medical Center and Clinics), Xarunta Caafimaadka iyo Cusbitaalka UW (UW Medical Center and Clinics), Cusbitaalka Jaarka UW Airlift Northwest (UW Neighborhood Clinics, Airlift Northwest).
UW Medicine iyo SCCA waxay ka qaybqaataan nidaaminta daryeelka caafimaad ee habaysan. Inkasta oo labadan urur ay kala gaar yihiin, waxay wadaagaan macluumaadka dawaynta bukaanada, lacagbixinta, iyo hawlaha la xidhiidha nidaaminta daryeelka caafimaadka ee habaysan.
206.543.3098 ama 855.211.6193